काठमाडौँ । प्रधामन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्लो केही दिनयता दबाबमा छन् । उनलाई सरकार जोगाउने साथै पार्टीलाई एक बनाउने दबाब परेको छ । पार्टी तथा सरकारको निर्णयहरु ‘स्वविवेक’ले गर्दै आएका उनी पछिल्लो समय अरुको कुरा सुन्ने भएका छन् । विस्तृतमा
निर्वाचनमा मेरो विजय सुनिश्चित छः बादल
जसपाले ओलीलाई विश्वासको मत नदिने, पार्टी एकता जोगाउने !
राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनको लागि डा. देवकोटा र बादलको उम्मेदवारी दर्ता
गगन थापाको आरोपः खोप प्रकरणमा भएको अनियमितता प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहा थियो
डा. खिमलाल देवकोटा ‘कलम’ चिन्हबाट चुनाव लड्ने !
राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा एमालेले बादललाई नै उम्मेदवार बनायो
माधव नेपाल भन्छन्ः अहिलेसम्म कुनै सहमति भएको छैन, भ्रममा नपर्न आह्वान
रमेश सिलवाल राखेपकाे नयाँ सदस्य सचिव
काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवका रुपमा रमेश सिलवाललाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले परिषद्को १८औं सदस्य सचिवको रुपमा सिलवाललाई नियुक्त गरेको हो । परिषद्को सदस्य सचिवको रुपमा सिलवाल नियुक्त भएको खबर अनौपचारिक रूपमा बाहिरिए पनि यससम्बन्धी निर्णय सरकारले सार्वजनिक भने गरेको छैन ।
संसदमा तीन विधेयक पेश
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सदनसमक्ष तीन विधेयक पेश भएको छ । बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५, बीउबिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५ र खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, २०७५ पेश भएका हुन् । दुई विधेयक कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले र खानेपानीमन्त्री बीना मगरले खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, २०७५ पेश गरेका हुन् ।
सांसदले उठाएका विषयलाई सरकारले गम्भीररूपमा नलिएकोप्रति काँग्रेसकाे आपत्ति
काठमाडौँ । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सांसदले उठाएका विषयलाई सरकारले गम्भीररूपमा नलिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरू गर्नेबित्तिकै काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुख महराले काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खाँणलाई बोल्ने समय दिएका हुन् ।
लोकसेवाकाे विज्ञापन संविधानसम्मत, सरकार पछाडि फर्किँदैन : मन्त्री पण्डित
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहका लागि लोक सेवा आयोगले पछिल्लोपटक प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधान, ऐन कानून र लोक सेवाको मर्मअनुसार नै गरिएको प्रस्ट पारेका छन् ।
तरकारी जाँच गर्ने निर्णय फिर्ता लिएकामा संसद्मा आपत्ति
काठमाडौँ । सांसद अनिता देवकोटाले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने तरकारी जाँच गर्ने निणर्य सरकारले फिर्ता लिएकामा आपत्ति जनाएकी छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको प्रारम्भमै उनले भनिन्, ‘भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने तरकारी जाँच गर्ने भनिएको थियो तर सरकारले त्यो निणर्य किन फिर्ता लियो रु विषादीयुक्त तरकारी उत्पादन र बिक्री वितरणमा कडाइका साथ रोक लगाइयोस्, जनताको स्वास्थ्यको ख्याल गरियोस् ।’
काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पार्टीको आन्तरिक र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न आज बस्दैछ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकमा नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिद्वारा प्रस्तुत नियमावली, राष्ट्रिय जागरण अभियानको पहिलो चरणको समीक्षालगायत विषयमा छलफल हुने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ ।
गुणस्तरहीन काम गर्ने जो कोहीलाई कारवाही गरिने शहरी विकासमन्त्रीकाे चेतावनी
नेपालगञ्ज । शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले पूर्वाधार संरचना निर्माणमा गुणस्तरहीन काम गर्ने जो कोहीलाई पनि कारवाही गरिने बताएका छन् । शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले आज नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा उनले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा वातावरण विनाश हुन नदिन सरकार सचेत रहेको बताए ।
काठमाडौँ । थप उपचारका लागि नेपाल क्यान्सर हस्पिटल हरिसिद्धीमा रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)का पोलिटब्यूरो सदस्य श्रीनाथ अधिकारीको अवस्था जटिल हुँदै गएको छ । गएको पुस २७ गते चितवनको बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा भर्ना हुनु भएका उनलाई वैशाख २२ गते थप उपचारका लागि हरिसिद्धी लगिएको थियो ।
जब ट्वीटरमा विष्णु रिमालले 'छाैंडा' शब्द प्रयाेग गरे...
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा प्रयोग गरेको शब्दलाई लिएर नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । रिमालले आइतबार बिहानै ट्वीटरमा आक्रामक ट्वीट गरेका थिए । सरकारको विरोध गर्नेहरूलाई लक्षित गर्दै कवितात्मक शैलीमा लेखिएको ट्वीटमा प्रयोग गरिएको ‘छौंडा’ शब्दलाई यतिबेला उनीमाथि आक्रमण भइरहेको छ ।
काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै– पार्टीको आन्तरिक र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्ने
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पार्टीको आन्तरिक र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न आज बस्दैछ ।